YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, July 29
Mizzima website under attack
Tuesday, 29 July 2008 17:15
New Delhi — The Burmese website of Mizzima News,aBurmese Independent News Agency based in New Delhi, has come under persistent and severe Distributed Denial of Services attack causing the website to become inaccessible since Sunday.
The DDoS attacks flood the communication channel of Mizzima's servers with data up to the extent that the site can no longer handle.
According the Mizzima's webmaster,aDDoS attack is an attempt to disableawebsite, by overwhelming the site with information requests so that it cannot respond to regular traffic.
Mizzima website received more than five Gigabytes of data in less than 15 minutes, many times more than it usually receive, said the webmaster adding that the enormous amount of information received is more than the site can handle.
While, technically, the origin of the attack is impossible to trace, Mizzima's friend,atechnocrat who monitors the site, aid the attack is clearly targeted.
He said, while this is not the first attempt, there had been plenty of attempts t intrusion from servers in China, Russia and Hungary. At least 30 servers are involved in the case of the attack on the Mizzima Burmese website, he added.
Mizzima News Agency, run by Burmese journalists, is an independent Burmese multi-media group focusing on Burma and related news and issues, and maintains four different websites – Mizzima.com, Mizzimaburmese.com, Mizzima.tv, mizzimaphoto.com.
Besides updated daily news both in English and Burmese, Mizzima also Podcast video stories on its mizzima.tv site, which are frequently picked up by other news organizations.
Both Mizzima's Burmese and English site normally attract an average of 10,000 to 15,000 unique visitors per day but the readership suddenly jumped to hundred thousands during the September protests in Burma last year and in the month of May and June 2008, following the killer Cyclone Nargis' hitting the country.
While it is difficult to determine who is behind the recent attack, with intrusion attempts coming from servers in China, Russia, Hungary, the Burmese military junta, which has several of its technocrats and engineers studying in these countries, could be behind the attack.
Burma's military rulers have banned Mizzima's sites in Burma and bypassing the government's internet filtering systems with the use of proxy and browsing the Mizzima's sites, if caught, could lead to users payingaheavy penalty.
Mizzima, however, is not the only Burmese news organization to have recently suffered such attacks. The Oslo based Democratic Voice of Burma's website also came under similar attack since July 20.
Inastatement released on Friday, the DVB deputy executive director, Khin Maung Win said the attacker is trying to shut-down the DVB's site from the internet as the attack has been getting more severe and persistent over the last four days.
And we are still under attack," said Khin Maung Win.
"Technically, it is of course difficult to say who is behind the attack. But we can easily say that Burmese government is behind this attack," Khin Maung Win said.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/29/20080အကြံပြုခြင်း
စပါးစိုက်တဲ့ ဦးကြီးတွေ ချမ်းသာကြပါစေ
အေးချမ်းမြေ့ | ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၀၈
“မနက်ဖြန်ဆိုရင် ကျနော်တို့ရဲ့ စံပြစိုက်ကွင်းတွေမှာ ပျိုးပင်တွေ ပြန်စစိုက်တော့မှာဗျ” ဟု ဒေါက်တာ မျိုးအောင်ကျော်က ပြောသည်။ သူက ဆရာဝန်တဦးဖြစ်သော်လည်း ဆန်စပါး နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပါဝင်စား သောကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါး သုတေသနကျောင်း (IRRI) တွင် သွားရောက် လေ့လာ သင်ယူခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ တွင်ပြုလုပ်သည့် စပါးအခြောက်ခံခြင်းနည်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းများတွင် တက်ရောက်ကာ လက်ရှိ စပါးအခြောက်ခံ နည်းပညာများကို ပြန်လည် ဖြန့်ဖြူးပေးနေသူ ဖြစ်သည်။
နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ရသော ဒေသများတွင် ယခု စပါးပြန်စိုက်နေကြပြီ။ သတင်းက အမျိုးမျိုး ကြားနေရ၏။ မျိုးစပါးများ အပင်မပေါက်သည့်ကိစ္စ၊ လက်တွန်းထွန်စက် မလောက်ငသည့်ပြဿနာ၊ လက်တွန်းထွန်စက်ရှိသော်လည်း စက်သုံးဆီ မရှိသည့်ကိစ္စ စသည့် အသံများဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်တွင် ဒေါက်တာမျိုးအောင်ကျော်နှင့် အဖွဲ့က လူအား၊ ငွေအား စိုက်ထည့်ကာ မုန်တိုင်းဒဏ် ခံခဲ့ရသည့် ကွမ်းခြံကုန်း မြို့နယ်အပိုင် တောကျောင်းကျေးရွာ၌ စံပြစိုက်ခင်းများ စတင်စိုက်ပျိုး ပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အဖွဲ့က ထိုဒေသတွင် စံပြအနေဖြင့် မျိုးစပါး ရွေးချယ်ပုံကို သရုပ်ပြကာ တောင်သူဦးကြီးများကို ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် စေခြင်းဖြင့် အစပြုခဲ့သည်ဟု ဒေါက်တာ မျိုးအောင်ကျော်က ပြောပြသည်။
“စစခြင်း ကျနော်တို့ရဲ့နည်းပညာကို ရွာသားတွေက လက်မခံဘူးဗျ။ အလှူရှင်တွေ မို့လို့သာ ကျနော်တို့ပြောတာကို သည်းခံ ပြီးနားထောင်နေကြတာ။ တကယ်တမ်း ကျနော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်း သူတို့လိုက်မလုပ်ကြဘူး” ဟု ဒေါက်တာမျိုးအောင်ကျော် နှင့်အတူ ငွေအားလူအားစိုက်ကာ ပါဝင်နေသော ကိုသန်းထိုက်က ပြောပြသည်။
ကိုသန်းထိုက်က မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ တဦးဖြစ်ပြီး နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းအပြီး ဒုက္ခသည်များကို လိုက်လံ လှူဒါန်းနေ ရာမှ ဒေါက်တာမျိုးအောင်ကျော်နှင့် ခင်မင်ရင်းနှီး သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“ခင်ဗျားတို့က လယ်ကွက်ပဲပေး။ ကျနော်တို့နည်းနဲ့ အစအဆုံးအလကား စိုက်ပေးမယ် ဆိုမှ လက်ခံတော့ တာ” ဟု ကိုသန်းထိုက်က ပြောသည်။ မျိုးစပါးများကို ဆားရေသုံး၍ အဖျင်းအညံ့ရွေးချယ်နည်းကို အသုံးပြုသည်ဟု ၎င်းကပြောပြ၏။
ယခင်က လယ်သမားများမှာ မျိုးစပါးကို အဖျင်းအညံ့ရွေးရာ၌ ရေထဲတွင်စိမ်ကြည့်ကာ နစ်သွားသည့် စပါးများကို အကောင်းဟု သတ်မှတ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“ခုလို ဆားရေနဲ့ စိမ်လိုက်တော့ ရေထဲမှာနစ်ခဲ့တဲ့ စပါးတွေပါ ပေါ်လာတယ်။ အဲဒီလို ပေါ်လာတဲ့ စပါးတွေကိုပါ အဖျင်းအညံ့ စာရင်းသွင်းလိုက်တယ်။ လုံးဝ အပင်အောင်မယ့် မျိုးစပါးစေ့တွေပဲ ရတဲ့နည်းပေါ့။ တကယ်က ဒါ ဘာမှမခက်တဲ့နည်းပါ” ဟု ကိုသန်းထိုက်ကပြောသည်။
နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်းဒဏ်ခံရသည့် ဒေသများတွင်ရှိသော မျိုးစပါးများ အားလုံး ပျက်စီးသွား သဖြင့် တခြားသောဒေသများမှ မျိုးစပါးများကို အလွယ်တကူယူကာ စိုက်ပျိုးရသည်ဟု ဒေါက်တာ မျိုးအောင်ကျော်က ပြောပြသည်။ များသောအားဖြင့် အညာဒေသ၊ ရှမ်းပြည် တို့မှ မျိုးစပါးများ ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ထိုမျိုးစပါးဟု ဆိုသောစပါးများထဲတွင် လုံးဝ အရည် အချင်းမပြည့်မီသော စပါးများပါလာကြောင်း သူကဆက်ပြောသည်။
“တနေရာမှာ မျိုးစပါးဆိုလို့ စိုထိုင်းစကိုစစ်ကြည့်လိုက်တော့ ကျနော် တော်တော် လန့်သွားတာ။ မျိုးစပါးမှာ ရေငွေ့ပါဝင် နှုန်းက ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးရှိရမှာကို အဲဒီစပါးတွေမှာ ၁၈ အထိရှိနေတယ်” ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။ ထိုစပါးများမှာ မျိုးစပါး မဟုတ်ဘဲ ရိတ်သိမ်းခါစ စပါးများသာ ဖြစ်နိုင်သည်ဟု သိရသည်။ တချို့ဒေသများတွင် ဆန်အဖြစ်ကြိတ်ခွဲမည့် စပါးများကို မျိုးစပါးများအဖြစ် ပြန်ချပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာမျိုးအောင်ကျော်ကပြောပြသည်။
တောကျောင်းကျေးရွာနှင့် အနီးတဝိုက်တွင် သူတို့စိုက်ပျိုးပေးထားသော စံပြစိုက်ခင်း ဧက ၆၀ ကျော်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ယခုအခါ စတင်၍ပျိုးထောင်တော့မည် ဖြစ်သည်။ တခြားသော သူများက ၃၅ ရက် ခန့်စိုက်ရသော ပျိုးပင်အရွယ်အစားကို သူတို့က ရက် ၂၀ ခန့်နှင့်ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုစပါးပင်များမှ ထွက်လာသော စပါးများကို မျိုးစပါးအနေနှင့် ရှေ့နှစ်တွင် ပြန်လည် ဖြန့်ဝေမည်ဟု ဒေါက်တာ မျိုးအောင်ကျော်က ပြောသည်။
“ကျနော့်အနေနဲ့ကတော့ ဧရာဝတီတိုင်းကသုံးနေကျ မျိုးစပါးတွေကိုပဲ စိုက်စေချင်တယ်။ တကယ်က မုန်တိုင်းဒဏ်မခံရတဲ့ ပုသိမ်လို မြောင်းမြလို ဒေသတွေမှာ မျိုးစပါးတွေ ရှိတယ်။ တချို့ သေသေချာချာ သိမ်းထားတဲ့ တောင်သူဦးကြီးတွေ ရှိတယ်။ အဲဒါတွေကို စစ်တမ်းကောက် စာရင်းလုပ်ပြီး မျှပေးရင်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလောက်အထိ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး” ဟု ၎င်းက ပြောပြသည်။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ဒေသတွင်စိုက်ပျိုးနေသော စပါးမျိုးများမှာ ဆင်းရွှေလီ၊ ဆင်းရွှေဝါ အစရှိသည့် စပ်မျိုး စပါးများဖြစ်၍ ရာသီဥတုဒဏ် မခံနိုင်ဘဲ ထိုစပါးမျိုးများကို စိုက်လျင် ဓာတ်မြေသြဇာ မြောက်များစွာ ထည့်ပေးရသောကြောင့် အချိန်ကြာ သည်နှင့်အမျှ မြေကြီးကိုထိခိုက်နိုင်ကြောင်း ဒေါက်တာ မျိုးအောင်ကျော် က ရှင်းပြသည်။ ယခုအခါ ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းတို့တွင် ယင်းစပါးမျိုးများ စိုက်ပျိုးရန် တရုတ်ကုမ္ပဏီတချို့က စတင်မိတ်ဆက်နေပြီ ဟု ဆို၏။
“ကျနော်ကတော့ လက်ရှိစိုက်နေတဲ့ ဒေသခံ အထွက်တိုးစပါးမျိုးပဲပိုကြိုက်တယ်။ သူက ဒဏ်ခံနိုင်တယ်။ ဒေသနဲ့ ပိုကိုက် ညီတယ်။ လက်ရှိမှာ အထွက်တိုးစပါးစိုက်နှုန်းက တနိုင်ငံလုံးနဲ့ယှဉ်ရင် သုံးပုံ ၂ ပုံလောက် ရှိပါတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း ဒဏ်ခံရသော ဒေသများတွင် လယ်ယာမြေ ဧက ၁. ၃ သန်းကျော် ပျက်စီးသည်ဟု ဆိုသော်လည်း လယ်ပြန်စိုက်ရန် လုံးဝမဖြစ်နိုင်သော မြေယာမှာ ဧက ၂ သိန်းကျော် သာရှိသည်ဟု ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
“မြေတွေကို ဆားငန်ရေဝင်တယ် ဆိုပေမယ့် အဲဒါ အဓိက ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလို ပြောကြလို့ ကျနော်ချက်ချင်း IRRI ကိုဆက်သွယ်ပြီး မေးကြည့်တယ်။ သူတို့က အဲဒါ ပြဿနာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ သူတို့ဆီမှာ ဆူနာမီတုန်းကနဲ့ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း ဝင်သွားခဲ့ပြီးတုန်းက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရဲ့ ဆန်နမူနာတွေ ရှိတယ်လေ” ဟု သူက ဆိုသည်။
ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းအပြီး မုတ်သုန်မိုး ဆက်တိုက်ဝင်လာခဲ့ရာ ဆားငန်ရေများ ပျော်ဆင်းသွားပြီး ဆား ပါဝင်နှုန်းလျော့သွား သဖြင့် စိုက်ပျိုး၍ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ယခုနှစ်တွင် နည်းပညာ အားနည်းသော ကြောင့် တချို့သောဒေသများတွင် အချိန်မကုန်သင့်ဘဲ ကုန်ခဲ့ရကြောင်း ဒေါက်တာမျိုးအောင်ကျော်က ရှင်းပြ၏။ သူတို့အဖွဲ့ ၎င်းဒေသတွင် ဓာတ်မြေသြဇာကို မသုံးမဖြစ်အခြေအနေ မှသာသုံးစွဲ၍ သဘာဝ မြေသြဇာသုံးတတ်ရန်၊ ပျိုးပင်နည်းနည်း နှင့် ထွက်နှုန်းများများရရန်၊ အရည် အသွေး ပြည့်မီသော စပါးများ ထွက်ရန် စနစ်တကျစိုက်ပျိုးတတ်ဖို့ နည်းပညာ ဖြန့်ဖြူးရုံမက လက်တွေ့သရုပ်ပြ လုပ်ဆောင် ပေးလျက် ရှိ၏။
နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းကြောင့် အထွက်နှုန်းလျော့ပါးမည် ဖြစ်သော်လည်း ၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ထိခိုက်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော် နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းထက် ထိခိုက်မှုပိုရှိနိုင်သော ပြဿနာတရပ်ရှိသေးသည်။ ထိုပြဿနာက စပါးဈေးကို ဖိအားပေး၍ ချခိုင်းနေသည့် ပြဿနာဖြစ်သည်။
“ဧည့်မထတင်း ၁၀၀ ကို ကျပ် ၆ သိန်း ၇ သိန်းလောက်ဖြစ်လို့ ထိန်းတာက ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ ဒါက ထိန်းကိုထိန်းရမှာ။ ဒါပေမယ့် ခုဟာက ၃ သိန်း ၂ သောင်းနဲ့ ၃ သိန်းခွဲကြားမှာပဲ ရှိတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်က ၃ သိန်းဝန်းကျင်လောက် ရှိနေတော့ ကျနော် တို့လို လယ်သမားတွေ အတွက် မကျန်သလောက်ဘဲ။ အရမ်းနစ်နာတယ်” ဟု ရန်ကုန်တိုင်း သုံးခွမြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာတရွာမှ လယ်သမားတဦးက ပြောပြသည်။
လယ်သမားများအနေနှင့် စပါးဈေးအလွန်ကျဆင်းသောကြောင့် စပါးကို စိုက်ပျိုးချင်စိတ် မရှိတော့ကြောင်း ၎င်းကပြောပြ သည်။ ၎င်းတို့နယ်ဘက်တွင် စပါးကို တာဝန်ကျေသာ စိုက်ပျိုးကြပြီး တာဝန်နည်းကာ အမြတ် များသော ပဲတီစိမ်းကိုသာ အားထား စိုက်ပျိုး ကြသည် ဟုဆိုသည်။
“ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ပဲပါဈေးကျတော့ ကျနော်တို့တွေ ၂ သီးစလုံးနစ်နာတယ်ဗျ” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ထိုပြဿနာကြောင့် လာမည့်နှစ်တွင် ဆန်အထွက်နှုန်း ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကျဆင်းနိုင်သည် ဟု ဒေါက်တာ မျိုးအောင်ကျော် က ရှင်းပြသည်။ ယခုနှစ် နွေစပါးပေါ်ချိန်မှစ၍ ထိုပြဿနာ ကြုံတွေ့နေရပြီဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
“စပါးကိုဈေးချခိုင်းတယ်။ ရေနံကဈေးတက်၊ အလုပ်သမားခ ဈေးတက်၊ ကျန်တဲ့ အစစ အရာရာ ဈေးတက်ပြီး စပါးဈေးက ကျနေတော့ တောင်သူဦးကြီးတွေ အလုပ်လုပ်ရတာ စိတ်မပါတော့ဘူး။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ့် နေရာ မှာ ဝိတ်တွေ လျှော့လာကြ တယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောပြသည်။
ပေါင်းပင်ရှင်းရန် အလုပ်သမားမငှားနိုင်တော့သောကြောင့် ပေါင်းများမရှင်းနိုင်တော့ဘဲ မျိုးမအောင်၊ အဆင့်မမီသည့် စပါး များစွာ ပါလာခဲ့ခြင်းက ဥပမာ တခုဖြစ်ကြောင်း သူကရှင်းပြသည်။
“အရမ်း အမြတ်ကြီးစားဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့ အမြတ်လေးရမှပဲ သူတို့ တောင်သူတွေ လုပ်ပျော်မှာပေါ့ ဗျာ။ အဲဒီအတွက်တော့ စဉ်းစားပေးသင့်တယ်” ဟု သူက သုံးသပ်သည်။
သူတို့အဖွဲ့ကလေးက လူအားကော ငွေအားပါစိုက်ထုတ်၍ မုန်တိုင်းသင့် ဒေသများကို ကူညီလျှက်ရှိသည်။ နည်းပညာကို လည်း တတ်နိုင်သလောက် ဖြန့်ဖြူးသည်။ သူတို့ သတင်းကို တဆင့်ကြားဖြင့် ဆက်သွယ်လာ သူတို့လည်း ရှိသည်။
လက်တွန်းထွန်စက်များ ပေးလှူခဲ့ရုံမက ထွန်ပေးသူကိုပါ အခပေး၍ငှားပေးသည်ဟု သူတို့ အဖွဲ့ထဲမှ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ တဦးဖြစ်သူ ကိုဝင်းကိုကပြောသည်။ ထွန်စက်မောင်းရန် ဆီလည်း ပေးသည်တဲ့။
“တနေ့ထွန်ယက်ခ ဆန် ၂ ပြည်ပေးတယ်ဗျာ။ အဲဒီတော့ ထွန်စက်မလောက်တဲ့ ပြဿနာလည်း မရှိတော့ဘူး။ အဲဒီလူက လယ်တိုင်းကို လိုက်ထွန်လိုက်ရုံပဲ။ ကျနော်တို့ ပေးတာနည်းတယ် ဆိုတာ တော့သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့လည်း ဒီလောက်ပဲ တတ်နိုင်တယ်။ သူတို့လည်း ကျေနပ်ကြပါတယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
မြန်မာပြည်မှာတုန်းက အိမ်နားက မူကြိုကလေးတွေ နေ့လယ်စာစားခါနီးတိုင်း အော်ဟစ် ဆုတောင်းတာ ကြားဖူးသည်။ “စပါးစိုက်တဲ့ဦးကြီးတွေ ကျန်းမာကြပါစေ” ဟု သူတို့နေ့တိုင်း ဆုတောင်းကြသည်။ စပါးစိုက်တဲ့ ဦးကြီးတွေ ကျန်းမာကြပါစေ ဟု ဆိုရုံသာမကဘဲ ချမ်းသာကြပါစေဟု တိုး၍ ဆုတောင်းသင့်သည် ထင်၏။
“ကျနော်ကတော့ လယ်သမားတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ကူညီချင်တယ်ဗျာ။ လယ်သမားတွေဆီက တချိန်လုံးစားထား တော့ ပြန်လုပ်ကို လုပ်ပေးသင့်တယ်” ဟု ဒေါက်တာမျိုးအောင်ကျော်က ပြောဆို သွားသည်။
ကချင် အပစ်ရပ်ခေါင်းဆောင်များ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့သစ်ဖွဲ့
ဧရာဝတီ | ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၀၈
ကချင်တိုင်းရင်းသား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ခေါင်းဆောင်များက ကချင်လူထုကို ကိုယ်စားပြုမည့် နိုင်ငံရေး အဖွဲ့သစ် တဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့(KIO) ၊ ကချင် ဒီမိုကရေစီသစ် တပ်မတော် (NDA-K) နှင့် ကချင် အတိုင်ပင်ခံ ကောင်စီ (KCC) တို့ပါဝင်သည့် အဆိုပါ အဖွဲ့ကို ယခုလအတွင်း ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး KIO ဒု ဥက္ကဌ (၂) ဒေါက်တာ တူးဂျာက ဦးဆောင်သည်ဟု ယင်းအဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သူများက ပြောသည်။
KIO နိုင်ငံခြားရေးတာဝန်ခံနှင့် ဒု ဥက္ကဌ (၁) ဗိုလ်ချုပ် ဇော်ဆိုင်းက“ကချင်လူထုအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ဖွဲ့စည်း လှုပ်ရှားမှုမှာ ပူးပေါင်း ပါဝင်လာနိုင်ရေးအတွက် အခု ဖွဲစည်းမှုက ပထမ ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ယခုဖွဲ့စည်းလိုက်သော အဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင် အနည်းဆုံး ၅၀ ခန့်ပါဝင်ပြီး KIO နှင့် NDA-K အဖွဲ့များမှ ကိုယ်စား လှယ် ၁၀ ဦး စီ ပါဝင် ကြောင်း၊ KCC အဖွဲ့နှင့် တခြားသော အရပ်သားအဖွဲ့များက ဆက်သွယ်ပါဝင်လာရန် ကျန် ရှိသေးကြောင်း၊ အဖွဲ့၏ အမည်ကိုလည်း မရွေးချယ်ရသေးကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“ဒီ အဖွဲ့ကို တရားဝင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခွင့်ရခဲ့ရင်တော့ အဖွဲ့အမည် ပေးရမှာပါ”ဟု ဗိုလ်ချုပ်ဇော်ဆိုင်း က ပြောဆိုသည်။
အဖွဲ့ဝင်များအနေနှင့် အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ တခုအတွက် နောက်ဆုံးအချိန်အထိ နိုင်ငံရေး ပါတီတရပ်၏ တာဝန် များကို ထမ်းဆောင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကချင်လူထု၏ စည်းလုံးမှုနှင့် ကူညီထောက်ပံ့မှုများရရှိရေး အတွက် စည်းရုံး ဆောင်ရွက်သွားရန် အစီစဉ်ရှိသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
ယင်းအဖွဲ့သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ စစ်အစိုးရက ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ပြင်ဆင်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စစ်အစိုးရအနေနှင့် ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံရေး ပါတီဖွဲ့စည်းခွင့် ပေးမည်မပေးမည် ဆိုသည်ကို မသေချာ သေးကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် တရုတ် မြန်မာ နယ်စပ် အနီး ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာ မြို့၌ ကချင် ခေါင်းဆောင်များက ယခု အဖွဲ့သစ်နှင့် ကချင်လူထု မိတ်ဆက်ပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ KIO ၊ NDA-K နှင့် KCC အဖွဲ့ဝင်များ အပါအ၀င် ပရိသတ် ၈၀၀ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု တက်ရောက်ခဲ့သူတဦးက ဆိုသည်။
ယခုအဖွဲ့သစ်သည် နိုင်ငံရေးပါတီအနေနှင့် ဦးတည်ရည်မှန်းသည့်အတိုင်း လွယ်ကူချောမွေ့စွာဖြင့် အောင် အောင်မြင်မြင် လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ရန် ထောက်ပံ့ကူညီမှုများရရှိနိုင်မည်ဟု မထင်မြင်မိကြောင်းကို KIO ခေါင်း ဆောင်များနှင့် နီးစပ်သူ တဦးဖြစ်သည့် မာဂရမ် က ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သော မေလ ကပင် ဖွဲ့စည်းနေသည်ဟု ယူဆရသော ယင်းအဖွဲ့နှင့် ပတ်သက်ပြီး KIO လက်အောက်ခံ ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် KIO အောက်ခြေ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အတိုက်အခံ ပြုလုပ်လိုမှုများကိုတွေ့မြင် ရကြောင်းနှင့် ထိုသို့ သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ရှိနေသောကြောင့် KIO ခေါင်းဆောင် များအနေနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့စည်းရေး အတွက် တခြားသော နည်းလမ်းကို ရှာဖွေရဖွယ်ရှိကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
KIO အဖွဲ့သည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် စစ်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပြုလုပ်ခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားသော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များအနေနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်း လိုပါက လက်နက် စွန့်လွှတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စာရင်းရှိ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကို အထူး ရဲ တပ်ဖွဲ့ (ပြည်သူ့စစ်) ပုံစံ ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်ကြောင်း စစ်အစိုးရက တိုက်တွန်းမှုများရှိသည်ဟုလည်း KIO နှင့် နီးစပ် သူများက ပြောဆိုသည်။
တိုင်းရင်းသား အပစ်ရပ်အဖွဲ့များအနှေင့် ယင်းသို့ လက်နက်စွန့်ရန် မဆုံးဖြတ်ပါက စစ်အစိုးရပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ခွင့်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ ဖွဲ့စည်းခွင့်ကို ငြင်းပယ်ခံရဖွယ်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
သတ်မှတ်ချက် မလိုက်နာသည့် ဆန်ကုန်သည်များကို ထောင်ဒဏ် ချမှတ်မည်
အောင်သက်ဝိုင်း/ရန်ကုန် | ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၀၈
စစ်အစိုးရက ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP သို့ ဆန်ရောင်းချသည့် ကုန်သည်များ၊ ခွင့်ပြုချက် မရှိ နယ်မြေကျော် ကူးသန်းရောင်းဝယ်သည့် ဆန်ကုန်သည်များနှင့် တရားမ၀င် ပြည်ပနိုင်ငံ များသို့ ဆန်တင်ပို့သည့် ကုန်သည်များ ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး ထောင်ဒဏ်ချမှတ် အရေးယူကာ လိုင်စင်ပါ သိမ်းမည်ဟု သတိပေး ပြောကြားထား ကြောင်း ရန်ကုန်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသရှိ ဆန်ကုန်သည်ကြီးများက ပြောသည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် လယ်ယာစိုက်ပျိူးရေးလုပ်ငန်းများ အကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးပြီး ဧရာဝတီတိုင်းမှ သိုလှောင်ဆန် တင်းထောင်ပေါင်းများစွာ ပျက်စီးခဲ့ရသည့် နောက်ပိုင်း ပြည်တွင်း ဈေးကွက်တွင် ဆန်ဈေးနှုန်း ကမောက်ကမ ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် စစ်အစိုးရက ဆန်ရောင်းဝယ်မှုများကို ထိန်းချုပ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆန်ကုန်သည်များက ပြောသည်။
ထိုသို့ ဆန်ကုန်သည်များအား ခေါ်ယူသတိပေးမှုများကို မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်ကုန်သည်များအသင်းဥက္ကဌ ဦးအောင်သန်းဦးနှင့် အာဏာပိုင်များက မကြာခဏဆိုသလို ပြုလုပ်နေသည့်အတွက် ဆန်ကုန်သည်များမှာ လွတ်လပ်စွာ အရောင်းအ၀ယ် မပြု လုပ်နိုင်တော့ဘဲ ဆန်ဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းပြီး အခက်အခဲဖြစ်နေရကြောင်း သိရသည်။
နယ်ကျော်၍ ဆန်ရောင်းချမှုများကို တင်းကျပ်စွာ စိစစ်နေသည့်အပြင် ပြည်ပသို့ ဆန်တင်ပို့ မှုများကိုလည်း စစ်အစိုးရက ပြင်းထန်စွာအရေးယူ ထိန်းချုပ်နေသဖြင့် ဆန်ဈေးနှုန်းများ ထပ်မံကျဆင်းမည့် အရိပ်အရောင် တွေ့နေရသည်ဟု ဘုရင့်နောင် ကုန်သည်များက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော် ကုန်ဈေးနှုန်း ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် တဦးဖြစ်သည့် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဗိုလ်မှူးချူပ် အောင်သိန်းလင်းကလည်း ပြည်တွင်းဆန်ဈေးနှုန်း တည်ငြိမ်ရေးအတွက် ပြည်ပသို့ ဆန်တင်ပို့မှုများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိန်းချူပ်ထားပြီး ယင်းသို့ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှုလက်မှုလုပ် ငန်းရှင်များ အသင်းချူပ် (UMFCCI)၊ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါး ကုန်သည်များ အသင်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော် ကုန်ဈေးနှုန်း ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ တို့နှင့် ဟန်ချက်ညီညီ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ဇူလိုင် ၉ ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်သည့် ပြည်တွင်း သတင်း မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောခဲ့သည်။
မြို့တော်ဝန်၏ အဆိုအရ ဈေးကွက်တွင် ဆန်တပြည်လျင် ငွေကျပ် ၁၀၀ မှ ၁၅၀ ထိကျဆင်းနေသည့်အပြင် အခွန်လွတ်ဈေး များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်ကုန်သည်များ၏ အထူးဆန်ဆိုင်များတွင် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးထက် နိမ့်သော ဈေးနှုန်းဖြင့် ဆန်များ ရောင်းချပေး နေကြောင်း သိရှိရသည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီးစ အချိန်များက ဘုရင့်နောင် ဆန်ဈေးကွက်တွင် ဆန်အရောင်း အ၀ယ် မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ဆန်ဈေး နှုန်း အနေဖြင့် အမြင့်ပိုင်းတွင် ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ အာဏာပိုင်များ၏ ထိန်းချူပ်မှုကြောင့် ဈေးနှုန်း ထိုးကျသွားကာ ဆန်အိတ် တအိတ်လျင် မေလကုန်ပိုင်းက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဈေးနှုန်းထက် ငွေကျပ် ၁၀၀၀၀ နီးပါး ကျဆင်းသွားကြောင်း ကုန်သည်များကပြောသည်။
“ဆန်ဈေးက မေလနှောင်းပိုင်းနဲ့ အခု ယှဉ်ရင် အရမ်းကွာတယ်။ ဥပမာ-ပေါ်ဆန်းရှယ် တအိတ်ကို မေလကုန် တုန်းက ကျပ် ၄၅၀၀၀ လောက်ရှိတယ်။ အခုတော့ ကျပ် ၃၅၀၀၀ ပဲရှိတော့တယ်” ဟု ဘုရင့်နောင် ဆန်ပွဲရုံ ပိုင်ရှင်တဦးက ရှင်းပြသည်။
ဆန်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်မှုများ ပိတ်ဆို့နေသည့်အတွက် ကုန်သည်များ လက်ထဲတွင် ဆန်အများအပြား အရောင်းအ၀ယ် မဖြစ်ဘဲ ကျန်ရှိနေကာ ငွေဖော်လိုသော ဆန်ကုန်သည်များမှာ အရှုံးခံရောင်းချ နေရသည်ဟု သိရသည်။
“ပွဲရုံတွေမှာ ဆန်ရောင်းချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် နယ်ဝယ်လက်တွေ မရှိဘူး။ အဲဒီတော့ မြို့ပေါ် ၀ယ်လက်တွေနဲ့ပဲ ဆက်ပြီး အရောင်းအ၀ယ် လုပ်နေရတယ်။ ၀ယ်လိုအားထက် ရောင်းလိုအား များနေတဲ့ သဘောပေါ့” ဟု ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံသို့ ခေတ္တရောက်ရှိနေသည့် မြောင်းမြ ဆန်ကုန်သည်တဦးက ရှင်းပြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးကုန်သည်ကြီးများ အသင်းမှ ဆန်ကုန်သည်ကြီးတဦးကမူ နေ့စဉ် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း အသီးသီးမှ ရန်ကုန်မြို့နေ လူဦးရေအတွက် လုံလောက်သော ဆန်ပမာဏ ၀င်ရောက်နေကြောင်း ပြောသည်။
“ရန်ကုန်ဈေးကွက်ကို နေ့တိုင်း ဆန်အိတ် ၄ သောင်း ၀င်ရင် ရန်ကုန်လူထု စားဖို့ လုံလောက်တဲ့အပြင် ပိုတောင် ပိုသေး တယ်။ အခု ရန်ကုန်ကို ဆန်အိတ်တွေက လိုအပ်ချက် ပြည့်မီအောင် ၀င်နေတယ်။ ဈေးကတော့ ဒီတိုင်း ငြိမ်နေလိမ့်ဦးမယ်” ဟု အဆိုပါ ဆန်ကုန်သည်က ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးကုန်သည် အသင်း အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် တဦးကမူ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် လယ်လုပ် ငန်းများ ပျက်စီးသည်မှာ မှန်သော်လည်း ဆန်ရိက္ခာ ပြတ်လပ်သည်အထိ မဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း ပြောသည်။ အစိုးရနှင့် ဆန်ကုန်သည်များတွင် လက်ကျန် အရန်ဆန် အမြောက်အမြား ရှိနေပြီး တခြားသော မုန်တိုင်းဒဏ်မခံရသည့် ဧရာဝတီ ဒေသများတွင်လည်း စပါး သီးထပ်စိုက်ပျိုးမည် ဖြစ်သဖြင့် လုံးဝ ရိက္ခာပြတ်လပ်မှု မဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း ၎င်းက သုံးသပ်သည်။
“တနိုင်ငံလုံး စိုက်ဧက ၁၉.၈၃၄ သန်းမှာ ၁ သန်းကျော်လောက်ပဲ မုန်တိုင်းထိတာ။ ရာခိုင်နှုန်း အားဖြင့် နည်းတယ်။ လူ တယောက်ကို ပျမ်းမျှ တနှစ် ဆန်ကီလို ၂၀၀ လောက်ပဲ စားနိုင်တယ် ဆိုတာ အသင်းက စစ်တမ်းလုပ်ထားတယ်။ တင်းနဲ့ ပြောရင် လူတဦးကို တနှစ်ဆန် ၆ တင်း စားတယ်။ လူဦးရေ ၅၃ သန်းအတွက် တနှစ် ဆန်တင်း ၃၁၈ သန်း၊ စပါးအနေနဲ့ ပြောရင် စပါးတင်း သန်း ၁၀၀၀ ပဲလိုတယ်။ ပုံမှန် စပါးစိုက်ဧက ၁၉ သန်းကျော်ကနေ စပါးတင်း ၁၄၇၅.၄၇၈ သန်းထွက် တယ်။ အခု စပါးစိုက်ဧက ၁၈ သန်းပဲရှိတယ်ထားဦး လူဦးရေအတွက် လုံလောက်တယ်” ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
ရန်ကုန် ဘုရင့်နောင်ဈေးကွက်သို့ မုန်တိုင်းဒဏ်မခံရသည့် ဧရာဝတီဒေသများ၊ ပဲခူးတိုင်း အနောက်နှင့် ပဲခူးတိုင်းအရှေ့တို့မှ ဆန်များ နေ့စဉ်ဝင်ရောက်နေပြီး ပိုလျှံသည့်အတွက် မန္တလေးဈေးကွက်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် ဈေးကွက်များသို့ပင် ဆန်များ ပြန်လည်ပို့နိုင်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
“ရန်ကုန်ကနေ မန္တလေးကို ဆန်အိတ် ၁သောင်းကျော်၊ ပြီးတော့ ရှမ်းပြည်နယ်ကို နေ့တိုင်း ဆန်အိတ် ၂သောင်းနီးပါး တင်ပို့ခွင့်ပြုထားတယ်” ဟု ၎င်းကဆက်ရှင်းပြသည်။
ရန်ကုန် ဘုရင့်နောင် ဆန်ဈေးကွက်တွင် ပေါ်ဆန်းရှယ် (၂၄ ပြည်ပါ) တအိတ် ကျပ် ၃၃၀၀၀ မှ ၃၅၀၀၀ အကြား၊ မနောသုခ တအိတ် ၂၀၀၀၀ ၊ ပေါ်ကျွဲ တအိတ် ၂၁၅၀၀၊ တောင်ပျံရှယ် တအိတ် ၂၆၀၀၀ နှင့် ၂၉၀၀၀ အကြား၊ ဇီယာရှယ် တအိတ် ၁၉၀၀၀၊ ရွှေဝါထွန်းတအိတ် ၁၆၀၀၀၊ ရာကျော် တအိတ် ၁၄၅၀၀၊ ရေစိုဆန်ချော တအိတ် ၁၄၅၀၀ နှင့် ၁၆၀၀၀ အကြား ရှိကြောင်း စုံစမ်း သိရှိရသည်။
NEJ/ ၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
မစ္စ လော်ရာဘုရှ် ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာ ကလေးငယ်များ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကိစ္စများ တိုးတက်ရေး ပိုမိုကူညီမှု ပေးနိုင်ဖို့အတွက် အမေရိ ကန်သမ္မတကတော် လော်ရာဘုရှ် လာမည့်လ (၇) ရက်နေ့တွင် မဲဆောက်မြို့ရှိ မယ်တော်ဆေးခန်းသို့ လာရောက်မည် ဖြစ် သည်။
မယ်တော်ဆေးခန်း တာဝန်ခံ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်က “ကျမတို့ဆေးခန်းကို နောက်လ (၇) ရက်နေ့လာမယ်။ မဲဆောက်ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းကျောင်း တွေမှာ ဘော်ဒါ ဆောင်နေတဲ့ မြန်မာကလေး (၁,၅၀၀) နဲ့
ပြည်တွင်းက ကလေး (၁,၀၀၀) အတွက် လော်ရာဘုရ်ှတို့အဖွဲ့က မနှစ်စပြီး ထောက်ပံ့ကူညီမှု ပေးတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဒီက အခြေအနေကို လာရောက်လေ့လာတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရ တယ်” ဟု ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောသည်။
၎င်းကလေးငယ်များအတွက် ထောက်ပံ့မှုများကို နိုင်ငံတကာ ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီ (IRC) မှတဆင့် မယ်တော်ဆေးခန်းသို့ ပေးပို့လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ပြီး နယ်စပ်နှင့် ပြည်တွင်းမှ အဆောင်နေ မြန်မာကလေးငယ်များအတွက် သူမတို့အဖွဲ့မှ ကူညီပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း မယ်တော်ဆေးခန်း တာဝန်ခံက ပြောသည်။
လော်ရာဘုရှ်၏ ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မဲဆောက်မြို့ပိုင် နိုင်ကော်ကယ်ကျူလားဖန်းက “အမေရိ ကန်သမ္မတကတော် (၇) ရက်နေ့ မဲဆောက်ကိုလာမယ်။ သူ့ရဲ့ရှေ့ပြေးလူ (၃၀) မနက်ဖြန် ရောက် ပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်မှာဖြစ်တယ်” ဟု အတည်ပြု ပြောသည်။
မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ပညာရေးကော်မတီ (BMWEC) ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာမ နော်ဖောရေ က “လာမယ့် (၇) ရက်နေ့ သူနဲ့တွေ့ရင် ရွှေ့ပြောင်းကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးသင်ကြားမှု အနေအထား ကို ဒီလောက်နဲ့ မရပ်စေချင်ဘူး။ ဒီထက်ဆက်ပြီး ဆုံးခန်းတိုင် ပညာသင်ကြားခွင့် ရဖို့ဆိုတဲ့ အခွင့် အရေးကို ကူညီဖို့ တိုက်တွန်းမယ်” ဟု ပြောသည်။
မယ်တော်ဆေးခန်းနှင့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ပညာရေးကော်မတီအဖွဲ့များက လော်ရာ ဘုရ်ှအား နယ်စပ်ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေး အခြေအနေများအား ရှင်းပြမည်ဖြစ်သည်။
မဲဆောက်ဒေသအတွင်း မဲဆောက်၊ မဲလမတ်၊ ဖို့ဖတ်၊ သုံးမြို့နယ်တွင် မြန်မာကလေးငယ်ရွှေ့ ပြောင်း စာသင်ကျောင်း (၅၄) ကျောင်းရှိပြီး ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာကလေးငယ် (၁၀,၀၀၀) ခန့် ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသည်ဟု BMWEC ၏ စစ်တမ်းက ဖော်ပြထားသည်။ ။
ဖျက်သိမ်းခံဘဏ်တို့မှ ငွေလာမထုတ်ပါက နိုင်ငံပိုင်အဖြစ်သိမ်းမည်
ပီတာအောင်/ ၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
ဖျက်သိမ်းခံထားရသည့်် မြန်မာမေဖလားဝါးဘဏ်နှင့် အာရှဓနဘဏ်များမှ အပ်နှံငွေများလာ မထုတ်ယူပါက ယခုနှစ်အကုန်တွင် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းယူမည်ဟု အဆိုပါဘဏ်များ၏ စာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သိမ်းရေးအရာရှိက စစ်အစိုးရပိုင် သတင်းစာများမှတဆင့် ကြေညာထား သော်လည်း ငွေအပ်နှံသူများ မည်သည့်အတွက် မထုတ်သေးသည်ကိုမူ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပေ။
ဘဏ်အပ်နှံငွေအမျိုးမျိုးနှင့် အခြားပေးရန် တာဝန်များကို ဘဏ်၏ စာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သိမ်းရေး အရာရှိလက်မှ ရန်ကုန် ကော်လိတ္တော် အရာရှိထံသို့ အပ်နှံပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ အမှတ် (၆၂)၊ ဒုတိယ ထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းရှိ ရန်ကုန် ကော်လိတ္တော်အရာရှိ (ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံး ဌာနမှူး) ထံတွင် အထောက်အထား အပြည့်အစုံဖြင့် တောင်းခံထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည်။
သတင်းစာတွင် ထည့်သွင်းကြေညာသည့်ရက် ဇူလိုင် (၁၉) ရက် မှစ၍ ၂၀၀၈ခု ဒီဇင်ဘာ (၃၁) ရက် အတွင်း လာမထုတ်လျှင် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာအဖြစ် ပေးသွင်းမည် ဖြစ်သည်ဟုလည်း ပါရှိသည်။
ငွေအပ်နှံထားသူတို့အနေဖြင့် ကိုယ်တိုင် လာရောက်ထုတ်ယူရန်၊ ငွေစုစာအုပ်၊ မှတ်ပုံတင်မူရင်း၊ ငွေစာရင်းအမှတ်နှင့် ငွေအပ်နှံထားခြင်းဆိုင်ရာ အခြားအထောက်အထားများ တင်ပြရန် လိုအပ် ကြောင်း သိရသည်။ အထောက်အထားများ ပြည့်စုံမှုရှိမရှိ ဘဏ်များတွင် စိစစ်စေပြီးနောက် ငွေ ထုတ်ခွင့်အမိန့်ကို ရန်ကုန် ကော်လိတ္တော်အရာရှိက ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပါရှိသည်။
ယင်းဘဏ်တို့ ပိတ်သိမ်းခံရစဉ်ကတည်းက ငွေအပ်နှံသူများကို ငွေပြန်ထုတ်ပေးခဲ့သော်လည်း ယခုနောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကြေညာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်ရှိ အကြီးတန်း စီးပွားရေးသတင်း ထောက်တဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ခုဟာက နောက်ဆုံးစာရင်းရှင်း ဖျက်သိမ်းရေးအဖွဲ့က နောက်ဆုံးဘိတ် ခေါ်တာပေါ့နော်။ ဒါပြီးရင် ဘာမှ လက်မခံတော့ဘူး။ ဘဏ်ကတော့ ပိတ်သွားပြီ။ ရုံးခန်းလည်း မထားတော့ဘူး။ လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ဟာလည်း ပိတ်သွားတာ ကြာလှပြီ်။ ငွေမထုတ်ပဲ ကျန်တဲ့လူကတော့ မရှိ သလောက်ပဲ။ အထောက်အထား မပြည့်စုံတဲ့သူသော်လည်းကောင်း ငွေပမာန နည်းလို့ (၂) သောင်း (၃) သောင်းလောက်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး သွားမထုတ်တာလည်း ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ ငွေပမာဏများတဲ့ ဟာတွေကတော့ တော်တော်များများ ထုတ်ပြီးကြပါပြီ” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာမေဖလားဝါးဘဏ်နှင့် အာရှဓနဘဏ်နှစ်ခုကို ထိုဘဏ်များကိုယ်တိုင် ငွေမဲခ၀ါချသည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သည့်ဘဏ်များအဖြစ် သံသယရှိကြောင်း ၂၀၀၃ ခု နိုဝင်ဘာလတွင် အမေရိကန်အစိုးရ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်ကြေညာခဲ့သည်။
တဆက်တည်းမှာပင် အမေရိကန်ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများသည် အဆိုပါ ဘဏ်နှစ်ခုအပါအ၀င်
၎င်းဘဏ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ဘဏ်စာရင်းများနှင့်ပါ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ရန် အဆိုပြုချက် ကိုပါ အမေရိကန်အစိုးရ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာခဲ့သည်။ မြန်မာမေဖလားဝါးဘဏ်နှင့် အာရှဓနဘဏ် နှစ်ခုပါဝင်နေသည့် ဘဏ်စာရင်းများကိုမူ ခြွင်းချက်မရှိ ပိတ်ရမည်ဟုပါ ကြေညာ ထားသည်။
မကြာခင် မြန်မာစစ်အစိုးရ သတင်းစာများက အမေရိကန်အစိုးရ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန် ချက်ကို မှားယွင်းသည့်သဘောထားဆိုပြီး ပြောဆိုသည့်ပြင် မျှတမှုမရှိဟု တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ မကြာခင် ထိုဘဏ်နှစ်ခုကို စစ်အစိုးရက စစ်ဆေးပိတ်ပစ်ခဲ့သော်လည်း မည်သူတဦးကိုမှ ငွေမဲခ၀ါချမှုအတွက် ယနေ့တိုင် အရေးယူခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
ကမ္ဘောဇဘဏ် မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ စစ်ဆေးခံရဘဏ်ကငွေတွေ အလုအယက်ပြန်ထုတ်
NEJ/ ၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးခံနေရသဖြင့် ဘဏ်တွင် ငွေအပ် ထားသူများ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ငွေပြန်ထုတ်ယူနေကြမှု များနေသည်။
ကမ္ဘောဇဘဏ်သည်လည်း မြန်မာမေဖလားဝါးနှင့် အာရှဓနဘဏ်များကဲ့သို့ မကြာခင် ဖျက်သိမ်း ခံရဖွယ်ရှိသည်ဟု ပြင်ပတွင် ကောလာဟလများ ထွက်လာပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ ဘဏ်အပ်ငွေ များကို ပြန်ထုတ်လာကြခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုလလယ်ခန့်က ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဦးဇော်ဝင်းနိုင်ကို သက်ဆိုင် ရာက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုရာမှ အဆိုပါ ကောလာဟလ ထွက်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးဇော်ဝင်းနိုင် အဖမ်းခံရသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘောဇဘဏ်သို့ ခေတ်ပြိုင်က ဖုန်းအကြိမ် ကြိမ်ဆက်ခဲ့ရာ နံပါတ်အားလုံး ဆက်သွယ်မရသည့်အတွက် သီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိ သေးပေ။
“မူးယစ်ဆေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်ဆေးနေတယ်ကြားတာပဲ၊ မောင်ဝိတ်တို့နဲ့ ဆက်စပ်နေတယ် လို့ ပြောနေကြတယ်” ဟု ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတဦးက ပြောသည်။
အခြားဘဏ်များ ငွေထုတ်ယူမှု ပမာဏကို ကန့်သတ်ချက်ရှိချိန်က အချိန်မရွေး လိုသလောက် မိမိအပ်ငွေကို ထုတ်ပေးနေခဲ့သောကမ္ဘာဇဘဏ်သည် ယခုအခါ တပတ်တွင် တရက် ကျပ် (၁၀) သိန်းသာ အများဆုံးထုတ်ပေးနေကြောင်း ငွေအပ်ထားသူတဦးက ပြောသည်။
“ဒါက ခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီစည်းကမ်းကို ဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ပြန်ထားတာ ကြာပါပြီ။ ကျနော်တို့က ဘဏ်စည်းကမ်းအတိုင်း လုပ်ရတာပါ။ ဒီတပတ် (၁၀) သိန်းထုတ်ပြီးရင် နောက်တပတ်တွေမှာ လည်း တပတ် တရက် (၁၀) သိန်း ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်” ဟု ကမ္ဘောဇ ဘဏ်ခွဲတခုမှ မန်နေဂျာ တဦးက ပြောသည်။
ဘဏ်မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဖမ်းဆီးခံနေရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရာ ၎င်းက မသိ ကြောင်း၊ ဘဏ်နှင့် ပတ်သက်၍ ထွက်ပေါ်နေသော ကောလာဟလများမှာလည်း အမှားများ သာဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ဘဏ်အနေဖြင့် ပုံမှန်လည်ပတ်နေနိုင်ပါကြောင်း ထပ်မံရှင်းပြသည်။
ဘဏ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကောလာဟလများ ထွက်ပေါ်လာပြီး တပတ်အကြာတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရှင် အသိုင်းအ၀န်းတွင် မတွေ့ရသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သော ဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးအောင်ကိုဝင်း (ဆရာကျောင်း) ကို ကမာရွတ်မြို့နယ် ဘဏ်ရုံးချုပ်သို့ လာရောက် အစစ်ဆေးခံသွားသည်ကို တွေ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် ဘဏ်ခွဲပေါင်း (၂၃) ခုနှင့် လည်ပတ်နေကာ မိုင်းရှူး၊ ဖားကန့်တို့တွင်လည်း ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေပြီး စားအုန်းဆီ တင်သွင်းခြင်း၊ လမ်းဖောက် လုပ်ရေး စီမံကိန်းများနှင့် အင်းလေးအမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် ပြည်ပပို့ကုန် ဖိနပ်များ ထုတ်လုပ်သော လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံနေရသော ဦးဇော်ဝင်းနိုင်မှာ ယခင် စစ်ထောက်လှမ်းရေးမှ ဗိုလ်မှူးချုပ် သန်း ထွန်း၏ သားဖြစ်ပြီး ဦးအောင်ကိုဝင်း၏ မွေးစားသားဖြစ်သည်။ ဦးအောင်ကိုဝင်းသည် စစ်အစိုးရ နံပါတ်နှစ်ဖြစ်သူ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်အေးနှင့် နီးစပ်ပတ်သက်သူဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ။
တရုတ်-ကချင်နယ်စပ် ကန်ပိုက်တီးမှာ နယ်စပ်ဂိတ်သစ်ဖွင့်ဖို့ ပြင်ဆင်
NEJ/ ၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
တရုတ်နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ ၀င်ရောက်ရန် ကချင်ပြည်နယ် ကန်ပိုက်တီး၌ တရုတ်- မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်သစ် ဖွင့်လှစ်ရန် ရှိသည်ဟု ထိုဒေသတွင် အခြေစိုက်သည့် ဒီမိုကရေစီသစ် တပ်မတော်-ကချင် (NDAK) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်းက ပြောသည်။
၎င်းက “ဖွင့်ဖို့ အစီအစဉ်တော့ရှိတယ်။ ဆွေးနွေးနေတုန်းပဲ၊ အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှ ဖွင့်မယ်။ ခု လမ်းက သိပ်မကောင်းသေးပါဘူး။ လမ်းက ခဏခဏ ပြိုပြီး ပိတ်နေတယ်။ မိုးရာသီ လည်းဖြစ်တယ်။ လမ်းပိတ်တယ်။ တောင်ပြိုတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ သွားရေးလာရေး အစဉ်မပြေ သေးဘူး” ဟု ပြောသည်။
ကန်ပိုက်တီး နယ်စပ်ကို စစ်အစိုးရက ထိန်းချုပ်ထားပြီး အကောက်ခွန်မှရသည့် ငွေအချို့ကိုသာ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေအတွက် NDAK ကို ခွဲဝေပေးကြောင်း၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ၏ လုံခြုံ ရေးအတွက် စစ်အစိုးရနှင့် ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်သော်လည်း လက်ရှိအချိန်ထိ ယင်းအစီအစဉ် မရှိသေးဟု NDAK ခေါင်းဆောင်က ပြောသည်။
လာမည့် ပွင့်လင်းရာသီ နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ သို့မဟုတ် ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကူးပိုင်းတွင် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ ၀င်ရောက်လာနိုင်မည်ဟု NDAK က ခန့်မှန်းထားသည်။
ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း က “တရုတ်ဘက်က အရမ်းလောနေတယ်။ သူတို့ဆီမှာ တနှစ်တနှစ်မှာ ထိန်ချုံး မှာပဲ ၀င်ထွက်သွားလာနေတဲ့ ခရီးသွားတွေက သန်းနဲ့ချီရှိတယ်။ အဲဒီက တချို့တ၀က် (၁၀) ပုံ (၁) ပုံဖြစ်ဖြစ် မြစ်ကြီးနားကို လာတယ်ဆိုရင် သူအတွက် နှစ်ခါ အကျိုးရှိတာပေါ့။ မြစ်ကြီးနားအတွက် လည်း အကျိုးရှိနိုင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ နယ်စပ်ဂိတ် ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအနေဖြင့် ကန်ပိုက်တီးမှ ၀ရှောင်၊
၀ိုင်းမော်၊ မြစ်ကြီးနားနှင့် ရန်ကုန်ထိ ခရီးသွားရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး တရုတ်ပိုင်နက် ထိန်ချုံးမှ ကူမင်းထိ ခရီးလမ်းပွင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ။
ဖိနှိပ်မှုကို အာမခံပေးခြင်း အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်
Burma Campaign U.K/ ၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
မြန်မာစစ်အစိုးရပိုင် လုပ်ငန်းများကို အာမခံထားပေးခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် အကျိုး မရှိဘဲ စစ်အစိုးရ အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်သာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေသည်ဟု ယနေ့ထုတ် ပြန်သည့် ဘားမားကန်ပိန်း (ယူကေ) အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြသည်။
Insuring Repression ဟု အမည်ပေးထားသော အဆိုပါ အစီရင်ခံစာကို ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အာမခံ ကုမ္ပဏီ (၅၀၀) ကျော်နှင့် အာမခံလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်သူများအား ဆက်သွယ်မေးမြန်း ပြုစုထား ခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အာမခံပေးနေသည့် လန်ဒန်၊ အန့်ထ၀ပ်၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ ဂျာမနီ၊ ဘာမြူဒါ၊ ဂျပန်နှင့် မလေးရှားတို့မှ ကုမ္ပဏီကြီးများကို ဖော်ထုတ်ထား ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရပိုင် လုပ်ငန်းများကို အာမခံပေးသည့် ကုမ္ပဏီများတွင် လန်ဒန်အခြေစိုက် လွိုဒ် ဘဏ်ကြီး၏ ထူးခြားစွာ အရေးပါမှုအပါအ၀င် အာမခံကုမ္ပဏီ (၁၆) ခုတို့၏ အမည်များကို အစီရင် ခံစာအတွင်း၌ ဖော်ထုတ်ထားသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရက ၎င်းသုံးငွေ၏ ထက်ဝက်ခန့်ကို စစ်တပ်အတွက် သုံးနေပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍအတွက်မူ နိုင်ငံ စုစုပေါင်း ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး၏ (၁.၄) ရာခိုင်နှုန်းကိုသာ အသုံး ပြုနေသဖြင့် စစ်အစိုးရနှင့် စီးပွားရေး တွဲလုပ်ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် အကျိုး မရှိကြောင်း အစီရင်ခံစာက ထောက်ပြထားသည်။
ဘားမားကန်ပိန်း (ယူကေ) ၏ အရှိန်မြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့မှုများကြောင့် ၂၀၀၇ ခု ဇူလိုင်၌ ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း အာမခံကုမ္ပဏီကြီး (၃၀) အနက် (၁၃) ခုက မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေ သောကုမ္ပဏီများကို အာမခံပေးနေခြင်းအား ရုပ်သိမ်းခဲ့မှု၊ ယင်းနှစ် စက်တင်ဘာ၌လည်း စစ် အစိုးရပိုင် မြန်မာ့နိုင်ငံတကာ လေကြောင်း (အမ်အေအိုင်) သည် ၎င်း၏ မြန်မာ-ဘန်ကောက်-ကွာလမ်လာပူ နေ့စဉ် ခရီးစဉ်ကို ခေတ္တ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရမှုများ ရှိခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ထို့အပြင် စစ်အစိုးရပိုင် မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းသည် ၂၀၀၄ ခုတွင် အာမခံပေးသွင်းငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၅.၁) သန်း ရရှိခဲ့သော်လည်း ဒေါ်လာ (၁.၅၄) သန်းကိုသာ လျော်ပေးလိုက်ရသည်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် စစ်အစိုးရအတွက် အာမခံလုပ်ငန်းမှ နှစ် စဉ်ဝင်ငွေ ဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီ၍ ရရှိနေ သည်ကို အစီရင်ခံစာက ထောက်ပြထားသည်။
လန်ဒန်ရှိ လွိုဒ်ဘဏ်ကြီးက မြန်မာ့ရေကြောင်းနှင့် လေကြောင်းကုမ္ပဏီတချို့အတွက် အာမခံမှုများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြောင်းကို ယခုနှစ် ဧပြီလ၌ ၎င်းကိုယ်တိုင် ၀န်ခံခဲ့သည်သာမက၊ မြန်မာ့အာမခံလုပ် ငန်းကိုလည်း အာမခံပေးခဲ့ကြောင်း စစ်အစိုးရ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ဖော်ခဲ့မှု များရှိသဖြင့် ဘားမားကန်ပိန်း (ယူကေ) က အဆိုပါဘဏ်ကြီးကို ၂၀၀၅ ခု နာမည်ပျက်စာရင်းသို့ ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ။
မုန်တိုင်းသင့်ဒေသ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အခြေအနေ သံတမန်များလေ့လာ
မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ဆောင်
နေတာတွေကို ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် နိုင်ငံခြားသံတမန်တွေနဲ့ သတင်းမီဒီယာသမားတွေ
ကို မြန်မာအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဌာနက လှည့်လည်ပြသခဲ့ပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာသမား
တွေ လိုက်ခွင့်ရတဲ့ ပထမဆုံးခရီးစဉ်မှာ ဖျာပုံ၊ ဒေးဒရဲနဲ့ လပွတ္တာမြို့နယ်တွေ ပါဝင်
ဖျာပုံခရီးစဉ်ကို မြန်မာ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်သူက ဦးဆောင်ပြီး
ဂျပန်သံအမတ်၊ အမေရိကန်စစ်သံမှူးနဲ့ ရိုက်တာနဲ့ ဆင်ဟွာတို့က သတင်းသမားတွေ
ပါဝင်တယ်လို့ ဆင်ဟွာသတင်းတပုဒ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မနေ့တုန်းကတော့ ကုလ
သမဂ္ဂ လူသားဘေးဒုက္ခဆိုင်ရာ ကူညီကယ်ဆယ်ရေး အကြီးအကဲ ဂျွန် ဟုမ်းမ်စ်
(John Holmes) က နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လှူဒါန်း
ငွေတွေဟာ ၂၅% အထိ ဆုံးရှုံးနစ်နာနေရတယ်လို့ ၀န်ခံပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားငွေကို မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ FEC ခေါ် နိုင်ငံခြားငွေလဲလက်မှတ်နှုန်းနဲ့ လဲလှယ်ရ
တဲ့အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းလောက် ဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို နယူး
ယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာ မနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း
မစ္စတာဟုမ်းမ်စ်က ပြောကြားခဲ့တာပါ။ တစ် FEC ဟာ ပြင်ပပေါက်ဈေးထက် ၂၅%
လျော့နည်းနေတယ်၊ ဒီပြဿနာကို မိမိတို့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို အကြောင်းကြားထား
တယ်၊ ဒီကိစ္စမှာ ဘယ်သူအမြတ်ထွက်နေတယ်ဆိုတာ သူ့အနေနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း
မသိဘူးလို့ မစ္စတာဟုမ်းမ်စ်က ဆိုပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ သူ့အတွက် ဘဏ္ဍာငွေရဖို့အတွက် အတော်နိမ့်တဲ့ငွေလဲနှုန်းကို
အသုံးချခဲ့တယ်လို့ ဝေဖန်ကြပါတယ်။ နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့် မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်
နိုင်ငံတကာက ကူညီထောက်ပံ့တာတွေကို မြန်မာစစ်အစိုးရက ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်တဲ့
အပေါ် ပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ စစ်အစိုးရရဲ့ ငွေလဲလှယ်နှုန်းကြောင့် နိုင်ငံ
တကာကပေးတဲ့ အကူအညီတွေ သိသာတဲ့ ပမာဏအတိုင်းအတာနဲ့ ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခဲ့ရ
တာကို ကုလသမဂ္ဂက ၀န်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်မားတဲ့ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါကို
တားဆီးကာကွယ်ဖို့၊ ထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ တိုက်ဖျက်ဖို့တွေမှာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ ငွေကြေးအကူ
အညီနဲ့ FAO ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံကို အကူအညီ
နှစ်ဖက်သဘောတူ သုံးနှစ်စီမံကိန်းတခုကို FAO နဲ့ မြန်မာ့မွေးမြူရေးနဲ့ ကုသရေးဦးစီး
ဌာနတို့ကြား လွန်ခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ သတင်းတွေမှာ
စစ်အစိုးရနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံခြား အာမခံကုမ္ပဏီတွေကို နာမည်ပျက် စာရင်းသွင်း
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ရှိနေတာကြောင့် နိုင်ငံတကာက အရေးယူပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်တာတွေ ခံနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ
ဆက်လက်ပြီး စီးပွားရှာနေတဲ့ ပြည်ပကုမ္ပဏီတွေထဲက အာမခံလုပ်ငန်းတွေရဲ့ အမည်စာရင်းအသစ်တခုကို ဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက် မြန်မာ့
အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့က ဒီကနေ့ပဲ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့ လုပ်ငန်းတွေ
ကရတဲ့ ၀င်ငွေတွေဟာ စစ်အစိုးရကို အထောက်အပံ့ပေးရာ ရောက်နေလို့ အခုလိုထုတ်ပြန်ပြောဆိုရတာလို့လည်း ပြောပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို ကိုအောင်လွင်ဦးကတင်ပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုက်ရိုက်တမျိုး၊ သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့တဖုံ စီးပွားရေးလုပ်နေကြတဲ့
အာမခံလုပ်ငန်းတွေက အကျိုးအမြတ်တွေဟာ မြန်မာပြည်သူတွေ မခံစားရဘဲ စစ်
အစိုးရလက်ထဲသာ ရောက်နေတဲ့အတွက် ဖိနှိပ်မှုကို အားပေးအားမြှောက်ပြုရာ
ရောက်နေတယ်ဆိုပြီး ဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့
Burma Campaign UK က အစီရင်ခံစာ တစောင်ထုတ်ပြီး လူသိရှင်ကြားဖြစ်အောင်
လုပ်လိုက်တာပါ။ ဖိနှိပ်မှုကို အာမခံပေးနေခြင်းလို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီအစီရင်ခံစာ
ထဲမှာ နာမည်ကျော် လန်ဒန် လွိုဒ် (Lloyd's of London)၊ ဂျပန်နိုင်ငံက တိုကီအို
မာရိန်း (Tokio Marine) လို အာမခံကုမ္ပဏီကြီးတွေ အပါအ၀င် ကုမ္ပဏီပေါင်း ၁၆ ခုက
မြန်မာအစိုးရပိုင် အာမခံလုပ်ငန်းအတွက် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ ပေးနေတဲ့
အကြောင်း အလေးထားဖော်ပြခဲ့တာပါ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ အစီရင်ခံစာကို ရေးသားခဲ့တဲ့
Burma Campaign UK အဖွဲ့က လှုံ့ဆော်ရေး တာဝန်ခံတဦးဖြစ်တဲ့ ဂျွန်နီ ချက်တာတန်
(Johnny Chatterton) ပြောတာက …
"ဒီအာမခံလုပ်ငန်းတွေက မြန်မာစစ်အစိုးရအတွက် တနေ့တနေ့ ၀င်ငွေတွေ သန်းနဲ့ချီ
ရအောင် ဘယ်လို အထောက်အပံ့ ပေးနေတယ်ဆိုတာကို အခုအစီရင်ခံစာက ဖွင့်ချ
ထားတာပါ။ နောက်ပြီး ဒါတွေဟာလည်း အများပြည်သူ အကျိုးခံစားခွင့်မရဘဲ၊
စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ အိတ်ကပ်ထဲသာ ရောက်ကုန်တယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့သိပါတယ်။"
ဒါကြောင့်မို့လို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးလုပ်နေကြတဲ့ ဒီကုမ္ပဏီတွေကို သူတို့
လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းဖို့ လှုံ့ဆော်နေရတာလို့လည်း သူကပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း
တချို့ကုမ္ပဏီတွေကတော့ ခေါင်းမာမာနဲ့ သူတို့လုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လုပ်ဖို့သာ
ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်၊ လန်ဒန် လွိုဒ် ကုမ္ပဏီဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေ
ဟာ သူတို့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တောင် ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့တာမျိုး ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါ
တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူတို့လုပ်ရပ်တွေကို ဖော်ထုတ်ရတာလို့လည်း သူကပြောပါတယ်။
"ကျနော်တို့ အစီရင်ခံစာထဲမှာပါတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအားလုံးကို ဆက်သွယ်ခဲ့သလို၊ တချို့နဲ့
လည်း တွေ့ဆုံပြီး ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ စကားပြောခဲ့တာမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း
အခုစာရင်းထဲမှာပါတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအားလုံးကတော့ သူတို့ရဲ့မူတွေကို မပြောင်းနိုင်ဘူး
လို့ ပြောတဲ့အတွက်၊ နောက်တဆင့်တက် ဖိအားပေးတဲ့အနေနဲ့ ကျနော်တို့က သူတို့
နာမည်တွေကို ဖော်ထုတ်ပြီး အရှက်ခွဲလိုက်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေ မပြေလည်နိုင်သေးတာ၊ လူ့အခွင့်အရေး
ချိုးဖောက်မှုတွေ ရှိနေသေးတဲ့အတွက် အီးယူ (ဥရောပသမဂ္ဂ) လို၊ အမေရိကန်
ပြည်ထောင်စုလို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှုတွေ ရှိနေ
တာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီအရေးယူမှုတွေမှာ ပျော့ပြောင်းတာတွေ၊ အားနည်းတာတွေ
ရှိတယ်ဆိုပြီး ထောက်ပြတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အခုအစီရင်ခံစာထဲမှာလည်း အီးယူ
ရဲ့ ပစ်မှတ်ထားအရေးယူ ဒဏ်ခတ်မှုတွေဟာ အခုအာမခံလုပ်ငန်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ
စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ဟန့်တားနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုး မရှိဘူး ဆိုပြီးတော့လည်း
ပြောထားပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကို တားမြစ်ဖို့က မြန်မာ့အရေးအတွက် အရေးကြီး
တယ်လို့ Burma Campaign UK ကတော့ ယူဆထားတာပါ။
"ဒီကုမ္ပဏီတွေက ကမ္ဘာတလွှားမှာ အခြေစိုက်ထားတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း အာမခံ
လုပ်ငန်း ဈေးကွက်ကိုတော့ ဥရောပက ကြီးစိုးထားတာ ဖြစ်ပြီးတော့၊ အတော်များများ
ဟာ ဥရောပမှာ အခြေစိုက်ထားသလို၊ လန်ဒန်မှာလည်း အများအပြား ရှိကြပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့ မူဝါဒတွေကို ပြောင်းလဲအောင် ကျနော်
တို့ လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ အမာခံဝင်ငွေ အသက်သွေးကြောကို
Burma Campaign UK အဖွဲ့က လှုံ့ဆော်ရေးတာဝန်ခံတဦးလည်းဖြစ်၊ အခုနောက်ဆုံး
ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အစီရင်ခံစာကို ရေးသားသူလည်းဖြစ်တဲ့ ဂျွန်နီ ချက်တာတန် ဖြစ်ပါ
တယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ချမှတ်ထားတဲ့ ဘဏ္ဍာငွေကြေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့
ဒဏ်ခတ်မှုတွေအရဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာပေါ်က ထိပ်တန်းအာမခံကုမ္ပဏီကြီး ၃၀ ဟာ
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်စပ်ပြီး စီးပွားဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် မရှိတော့ပါဘူး။
ကျောက်မျက်တင်သွင်းမှု ပိတ်ပင်သည့် ဥပဒေ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ ကြိုဆို
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေ တိုးတက်မှုမရှိတာကြောင့် နောက်ထပ်
ဖိအားတွေ တိုးမြှင့်တဲ့အနေနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ်
အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုးတက်မှု
တွေ ဖြစ်ဖို့အတွက် သတင်းကောင်းပဲလို့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေက ကြိုဆို
လိုက်ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ကျောက်မျက်ရတနာတွေ အမေရိကန်ထဲသွင်းခွင့်
လုံးဝမရတော့အောင် ကန့်သတ်မယ့် ဒီဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ လူ့အခွင့်အရေး
လှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ သဘောထားတွေကို စုစည်းပြီး ကိုအောင်လွင်ဦးက တင်ပြပေးထား
မြန်မာနိုင်ငံက ကျောက်မျက်ရတနာတွေကို အမေရိကန်နိုင်ငံထဲ တင်သွင်းခွင့်မပြုတဲ့
ဥပဒေမှာ အရင်တုန်းက တတိယနိုင်ငံတွေကတဆင့် တင်သွင်းတာတွေကို တားမြစ်
ထားတာမျိုးမရှိဘဲ ဖြစ်နေရာက အခုတော့ အဲဒီလစ်ဟာချက်ကို ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့
ဥပဒေအသစ် တရပ်ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ပြဋ္ဌာန်းဖို့ ပြင်ဆင်နေတာပါ။
အထက်နဲ့ အောက်လွှတ်တော် ၂ ရပ်စလုံးက မကြာသေးခင် ရက်သတ္တပတ်တွေကပဲ
အတည်ပြုလက်ခံထားတဲ့ ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုပြင်
ပြောင်းလဲရေးတွေ ဖြစ်လာအောင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဆိုပြီး လူ့အခွင့်
အရေး လှုပ်ရှားသူတွေက ကြိုဆိုလိုက်ကြတာပါ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ နယူးယောက်ခ်
အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကို စောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ Human
Rights Watch အဖွဲ့ကြီးက စီးပွားရေးနဲ့ လူ့အခွင့်ရေးရာ ဒါရိုက်တာ အာဗင် ဂနေဆန်
(Arvind Ganesan) ပြောတာကတော့ …
"ကျနော်တို့အမြင်ကတော့ ဒါဟာ ကောင်းတဲ့ကိစ္စပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အရင်
နှစ်တွေတုန်းက မြန်မာစစ်အစိုးရ ပြောပုံအရဆိုရင် ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ကျော်လောက်
ကျောက်မျက်ရတနာတွေကို ရောင်းချရာကနေ ၀င်ငွေတွေ ရခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီငွေတွေဟာလည်း စစ်အစိုးရလက်ထဲပဲ ရောက်ကုန်တာပါ။ အတိတ်တုန်းက အမေ
ရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ဥပဒေက မြန်မာ့ကျောက်မျက်တွေကို တိုက်ရိုက်တင်သွင်းတာ
ကိုပဲ တားမြစ်ထားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ထိုင်း၊ အိန္ဒိယတို့လို တတိယနိုင်ငံတခုခုက
တင်သွင်းတာတွေကို မပိတ်ခဲ့ပါဘူး။ အခုတော့ ဒီအားနည်းချက်ကို ပိတ်လိုက်နိုင်တာ
ဒီလိုပိတ်ပင်နိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေ
ပြောင်းလဲလာကောင်း ပြောင်းလဲလာနိုင်မယ့် အတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်း အခု ပြဋ္ဌာန်း
ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဥပဒေဟာ ကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ သူတို့အနေနဲ့
လက်ခံယူဆထားကြတာလို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒီလို မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ငွေဝင်ပေါက်
တွေကို ပိတ်ပင်နိုင်ခြင်းအားဖြင့် တိုက်ရိုက်အကျိုးရလဒ်တွေ ရှိနိုင်သလို တခြားရေရှည်
အကျိုးဖြစ်ထွန်းစရာတွေ မြင်တယ်လို့လည်း သူက ယုံကြည်ထားတာပါ။
"အခု ဖိအားပေးမှုတွေက မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ်မှာ တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု
တွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ရေရှည်မှာ ဖြစ်နိုင်စရာရှိတာကလည်း မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ အိတ်ကပ်
ထဲကို ဒီလိုဝင်ငွေတွေ ရောက်သွားတဲ့အပေါ် ဖိအားတွေရှိလာမယ်ဆိုရင် သူတို့လုပ်ကိုင်
နေတာတွေ ပြောင်းလဲပြီး၊ ကိုယ့်ပြည်သူတွေအပေါ် တုံ့ပြန်မှုတွေ ပိုရှိလာမယ်၊ ကျန်းမာ
ရေး၊ ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတွေ ပိုလုပ်ကောင်း လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။"
တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို မဖြေရှင်းနိုင်သေးတာ၊ လူ့
အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ရှိနေတာကြောင့် နိုင်ငံတကာက အရေးယူ ဒဏ်ခတ်
ပိတ်ဆို့မှုတွေ ပြုလုပ်ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဝေဖန်သူတချို့က ဒါတွေဟာ
ထိရောက်မှုမရှိဘူးလို့ ပြောကြဆိုကြတာတွေ ရှိသလို၊ မြန်မာစစ်အစိုးရ ကိုယ်တိုင်က
လည်း ဒါဟာ မြန်မာပြည်သူတွေကိုသာ ထိခိုက်နစ်နာစေတယ်ဆိုပြီး ကာကွယ်ပြောဆို
တာတွေ ရှိပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေဘက်ကတော့ ဒီပြောဆိုမှုတွေဟာ
"ပြဿနာကတော့ နိုင်ငံတကာက အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုတွေက တစိုက်မတ်မတ် ရှိနေဖို့
လိုအပ်နေတာပါ။ ဒီဒဏ်ခတ်မှုတွေက တကယ့်ကို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့
ကျနော်ယူဆပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင် မြန်မာ့ပတ္တမြားဟာ တကယ့်ကို
အဖိုးတန် ဇိမ်ခံပစ္စည်းပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာဆိုရင်လည်း ဒီလိုပစ္စည်းတွေအတွက်
တကယ့်ကို ကြီးမားတဲ့ ဈေးကွက်တခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဒါတွေက မြန်မာစစ်အစိုးရ
အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအရေး
ယူမှုတွေက တကမ္ဘာလုံးက ၀ိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီး ထိရောက်မှုရှိမှာပါ။
လောလောဆယ် အဲလို မဖြစ်သေးတာပါပဲ။ လုံးလုံး အကျိုးသက်ရောက် မရှိဘူးဆိုတာ
နယူးယောက်ခ်အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Human Rights Watch
အဖွဲ့ကြီးက စီးပွားရေးနဲ့ လူ့အခွင့်ရေးရာ ဒါရိုက်တာ အာဗင် ဂနေဆန် ဖြစ်ပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ထင်ရှားတဲ့ Tiffany & Co.
Leber ရတနာကုမ္ပဏီ စတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့
ကျောက်မျက်တွေကို သူတို့ဆိုင်တွေတင် ရောင်းချဖို့ကို ငြင်းပယ်ထားတာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်
စက်တင်ဘာ သံဃာတော်တွေဦးဆောင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို မြန်မာအာဏာပိုင်တွေက
အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့နောက် ဒီလို မြန်မာကျောက်မျက်တွေကို သပိတ်မှောက်တာ အပါ
အ၀င် စစ်အစိုးရအပေါ် ဖိအားပေးမှုတွေလည်း အရှိန်မြင့်လာခဲ့တာပါ။ အခု အမေရိကန်
ပြည်ထောင်စုက အသစ်ပြဋ္ဌာန်းဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဒီဥပဒေကို ဒီမိုကရေစီရေး စွမ်းစွမ်း
တမံ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ကွယ်လွန်သူ အောက်လွှတ်တော်အမတ် တွမ် လန်းတို့စ်
(Tom Lantos) ကို အစွဲပြု အမည်ပေးထားပါတယ်။ ဒီဥပဒေကို အထက်နဲ့
အောက်လွှတ်တော် ၂ ရပ်လုံးက ဒီလထဲမှာပဲ ထောက်ခံအတည်ပြုထားတာဖြစ်ပြီး
သမ္မတ ဘုရ်ှက လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုပြီး ရက်ပေါင်း ၆၀ ပြည့်တဲ့အခါမှာတော့
ဥပဒေသစ်အဖြစ် အသက်ဝင်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငွေလဲနှုန်းကြောင့် မုန်တိုင်းအလှူငွေ ၂၅% ထိ ဆုံးရှုံးနေ
နာဂစ်မုန်တိုင်းကျရောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို လူသားချင်း ကူညီထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ကုလ
သမဂ္ဂရဲ့ ပေးအပ်လှူဒါန်းငွေတွေဟာ နိုင်ငံခြားငွေကို မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ FEC ငွေလဲ
လှယ်နှုန်းနဲ့ လဲလှယ်ထားတဲ့အတွက် ထောက်ပံ့ငွေအားလုံးရဲ့ ၁၅% ကနေ ၂၅% အထိ
ဆုံးရှုံးနစ်နာသွားခဲ့ရတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လူသားဘေးဒုက္ခဆိုင်ရာ ကူညီကယ်ဆယ်
ထောက်ပံ့ရေး အကြီးအကဲ ဂျွန် ဟုမ်းမ်စ် (John Holmes) က မနေ့က ၀န်ခံ ပြောကြား
နယူးယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာ မနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ
မစ္စတာဟုမ်းမ်စ်က ပြောကြားခဲ့တာမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ငွေလဲလှယ်နှုန်းကြောင့်
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းလောက် ဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
FEC လို့ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလက်မှတ် တစ်ဒေါ်လာဟာ ပြင်ပပေါက်ဈေးထက် ၂၅%
လျော့နည်းနေတယ်၊ ဒီပြဿနာကို မြန်မာစစ်အစိုးရကို မိမိတို့က အကြောင်းကြားထား
တယ်၊ ဒီကိစ္စမှာ ဘယ်သူ အမြတ်ထွက်နေတယ်ဆိုတာ သူ့ အနေနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း
မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ သူ့ရဲ့ ဘဏ္ဍာတိုက်မှာ ငွေပိုငွေလျှံရစေဖို့အတွက် အတုအယောင်
ငွေလဲလှယ်နှုန်းကို အသုံးချခဲ့တယ်လို့ ဝေဖန်သူတွေက ဆိုကြပါတယ်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့် မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် နိုင်ငံတကာရဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကို
မြန်မာစစ်အစိုးရက ကန့်သတ်ချုပ်ခြယ်မှုတွေအပေါ် ပြစ်တင် ရှုတ်ချမှုရဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ
အခုလို နိုင်ငံတကာရဲ့ ကူညီထောက်ပံ့ငွေအပေါ် စစ်အစိုးရရဲ့ ငွေလဲလှယ်နှုန်းကြောင့်
ကူညီထောက်ပံ့မှုမှာ ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခဲ့ရတာကို ကုလသမဂ္ဂက ၀န်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားအလှူရှင်နိုင်ငံတွေက မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်အလှူငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း
၂၀၀ လောက် ထည့်ဝင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမယ့် ကုလသမဂ္ဂကတော့ ဒေါ်လာ ၄၈၂ သန်းထိရရှိ
ဖို့ အလှူရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းနေပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မစ္စတာဂျွန်ဟုမ်းမ်စ်ရဲ့ သုံးရက်ကြာ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရ
၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်နဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လ မစ္စတာဟုမ်းမ်စ် ပထမအကြိမ် မုန်တိုင်းပြီးစ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိ
ချိန်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ကူညီကယ်ဆယ်ရေး နိုင်ငံခြားသား စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ မုန်
တိုင်းသင့်ဒေသတွေကလုပ်ငန်းတွေ ပိုမိုချောမွေ့နေတာ တွေ့ခဲ့ရတယ် လို့ ကုလသမဂ္ဂ
ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မစ္စ မီရှဲလ် မွန်းတာ့စ်ကဆိုပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ၊ အာဆီယံနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ သုံးဖွဲ့ပေါင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ မုန်တိုင်းလွန်
ဆန်းစစ်ချက် PONJA အစီရင်ခံစာက လာမယ့်သုံးနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွက်
ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၁,၀၀၀ ကျော် လိုအပ်တယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
မေလ ၂ ရက်နဲ့ ၃ ရက်နေ့တွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုကျရောက်ခဲ့တဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်
ကြောင့် လူပေါင်း ၁၄၀,၀၀၀ နီးပါး သေဆုံး ပျောက်ဆုံးခဲ့ကြရပြီးတော့ အိုးအိမ်၊
လယ်ယာ၊ ကျွဲနွား စတာတွေ အများအပြား ဆုံးရှုံး ပျက်စီးခဲ့ကြရပါတယ်။
သမ္မတဘုရှ် ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများနှင့် တွေ့နိုင်ဖွယ်ရှိ
လာမယ့် ဇန်န၀ါရီလကျရင် သမ္မတ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်
သမ္မတ ဂျော့ဒဗလျူဘုရှ် သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ် သမ္မတ ခရီးစဉ်အဖြစ်နဲ့ အာရှနိုင်ငံ
တွေကို သွားရောက်ဖို့ရှိပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံကို အရင်ဆုံး သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူတချို့နဲ့
တွေ့ဆုံကောင်း တွေ့ဆုံနိုင်တယ်လို့ ဘန်ကောက်ကလာတဲ့ သတင်းတချို့ကို ကိုးကားပြီး
၂၈ ရက်နေ့ထုတ် မဇ္စျိမသတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၆ ရက်နဲ့ ၇ ရက်နေ့တွေမှာ သွားရောက်မယ့် အမေရိကန်သမ္မတရဲ့ ထိုင်း
နိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း သမ္မတကတော် လော်ရာဘုရ်ှလည်း သူနဲ့အတူ လိုက်ပါမှာဖြစ်ပါ
တယ်။ သမ္မတနဲ့ သမ္မတကတော် နှစ်ဦးစလုံးတို့ဟာ မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့
တက်တက်ကြွကြွ ပြောဆို ဆွေးနွေးလေ့ရှိကြသူတွေပါ။ အခုလည်း သူတို့ရဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ
ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူတချို့နဲ့ တွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်တယ် ဆိုတဲ့
သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေတာပါ။ သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်ကတော့ သမ္မတရဲ့ ခရီးစဉ်
အသေးစိတ် အပြီးသတ် မဆွဲရသေးတာကြောင့် ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ အတည်မပြုနိုင်
သမ္မတဘုရ်ှအနေနဲ့ မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ တွေ့မယ့်မတွေ့ဘူးဆိုတာ မသေ
ချာပေမယ့် သမ္မတဘုရ်ှအနေနဲ့ မြန်မာ့အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်တုန်း မြန်မာ
နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ တိုက်တွန်းပြောကြားတာမျိုးတွေတော့ လုပ်နိုင်တယ်လို့ အမေ
ရိကန်ပြည်ထောင်စု အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့ US
Campaign for Burma အဖွဲ့ရဲ့ မူဝါဒရေးရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ဒင်က အခုလို
“သမ္မတဘုရ်ှက ထိုင်းမှာ နှစ်ရက်ထဲခင်ဗျ။ ဆိုတော့ ဒီနှစ်ရက်အတွင်းမှာ သူ့ အနေနဲ့
ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ရှိတယ်၊ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ တွေ့ဆုံမယ်၊ တခြားအစည်း
အဝေးတွေ တက်မယ်ပေါ့နော်။ သူ့ရဲ့ Schedule (ခရီးအစီအစဉ်) က ကျနော်တို့ သိ
သလောက်ဆိုရင် တော်တော်ကြီးကို ကျပ်ပါတယ်။
“အဲဒီတော့ သမ္မတအနေနဲ့ ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ မြန်မာအတိုက်အခံတွေကို တွေ့ ဆုံဖို့
ဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင်ဆိုတာ ကျနော် မသေချာပါဘူး။ ကြိုးစားမယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။
အနည်းဆုံး သူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကို စေလွှတ်ပြီးတော့ တွေ့ခိုင်း တာလည်း ဖြစ်
“အလားတူပဲ ကျနော်တို့သိသလောက် First Lady အနေနဲ့လည်း မဲဆောက်ကို သွားပြီး
တော့ လေ့လာနိုင်တယ်၊ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်ရဲ့ ဆေးခန်းတို့၊ နောက်တခါ တခြား
နေရာတွေပေါ့နော်၊ ဒုက္ခသည်စခန်းတို့ သွားကြည့်ချင်တဲ့ ဆန္ဒလည်းရှိတယ်။
“သို့သော်လည်း တကယ့်တကယ်မှာကျတော့ အချိန်က အရမ်းကို တိုတောင်းတဲ့ အခါ
ကျတော့ သူ တကယ် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်ဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင်ဆို
တာ ခုထိ ကျနော်တို့ မသေချာသေးပါဘူး။
“သို့သော်လည်း သမ္မတဘုရ်ှအနေနဲ့ ထိုင်းကို ရောက်တဲ့အချိန်မှာ သေချာတာက တော့
သူ့ရဲ့ မိန့်ခွန်းတွေအားလုံးမှာ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှု အကြောင်းကို
တကယ့်ကို အလေးအနက်ထားပြီး ပြောဆိုသွားမယ်၊ မြန်မာ့ အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး
တော့ အာဆီယံနိုင်ငံများက ဒီ့ထက်မက ပိုပြီးတော့ ဖိအားပေးမှုတွေလုပ်အောင် တိုက်
တွန်းသွားမယ်၊ နောက် မြန်မာပြည်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး
အကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ကြိုးပမ်း
အားထုတ်မှုတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါ သူ ထပ်လောင်းပြောကြားသွားမယ်။ ဒါတွေတော့
“နောက် တချိန်ထဲမှာပဲ ထိုင်းအစိုးရကိုလည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ မြန်မာ
အတိုက်အခံများရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ သူ့ရဲ့ စိတ်ပူပန်မှုတွေကိုလည်း သူ
ဟုတ်ကဲ့၊ သမ္မတဘုရ်ှက နောက် ခြောက်လလောက်ကျရင် သမ္မတသက်တမ်း ကုန်ဆုံး
တော့မှာဆိုတော့ နောက်တက်လာမယ့် သမ္မတ အနေနဲ့ မြန်မာ့အရေးနဲ့ပတ်သက်လာ
ရင် တက်တက်ကြွကြွ ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါသလားရှင့်။ ဒီ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်
ထားတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ မူဝါဒတွေ ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းသွားနိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုး
“ကျနော်တို့ နားလည်သလောက် အခု ဒီ သမ္မတလောင်းနှစ်ယောက် ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။
ဒီမိုကရက်ပါတီက ဘရက် အိုဘားမားနဲ့ ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီက ဆီနေတာ မက်ကိန်း
နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးက မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှိရင် အင်မတန်
“အထက်လွှတ်တော်မှာ မြန်မာ့အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ကျနော်တို့
အများကြီး ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာစစ်အစိုးရ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့အရေး
ယူမှုတို့၊ အခုနောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာပစ္စည်းတွေ တင်သွင်းတာ ပိတ်
ပင်ဖို့တို့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကွန်ဂရက်ကနေပြီးတော့ ဂုဏ်ထူးဆောင် ရွှေ
တံဆိပ်ပေးဖို့တို့ စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ၊ ကွန်ဂရက်ကနေပြီးတော့ မြန်မာ့အရေးနဲ့ပတ်သက်
တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကျဖို့ ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ နှစ်ယောက်စလုံးက ရှေ့တန်းကနေ
တက်တက်ကြွကြွ ဦးဆောင်ပါဝင် ထောက်ခံ ခဲ့ကြတာပါ။
“နောက် ခုချိန်မှာလည်း သူတို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်
ကျသက်တမ်း နအဖကတိုးတာကို ဆီနေတာမက်ကိန်းအနေနဲ့ရော၊ ဆီနေတာ
အိုဘားမားအနေနဲ့ရော ပြင်းထန်တဲ့ကြေညာချက်တရပ်စီ ထုတ်ပြန်ပြီး တော့ နအဖစစ်
အစိုးရကို ပြစ်တင် ရှုတ်ချခဲ့ကြတာပါ။
“နောက် ဆီနေတာမက်ကိန်းရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာရော၊ ဆီနေတာအိုဘားမားရဲ့ အဖွဲ့ထဲမှာရော
မြန်မာ့အရေးကိစ္စ အင်မတန်မှ ထောက်ခံအားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ၀င်ရောက်ပြီး
“ဆိုတော့ သမ္မတဘုရ်ှအနားယူသွားပြီး သမ္မတသစ်တက်လာတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့
ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှာ သဘောထား ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့
US Campaign for Burma အဖွဲ့ မူဝါဒရေးရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ဒင် ပြောပြခဲ့
ထိုင်းနဲ့ အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး နှစ်ပေါင်း ၁၇၅ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်
ဂုဏ်ပြုဖို့အတွက် အဓိက ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သမ္မတ ဘုရှ် အခုလို ထိုင်းနိုင်ငံကို လာ
ရောက်မှာဖြစ်ပြီး ခရီးစဉ်အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနဲ့
ဒေသတွင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိသလို အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အာရှ
ဒေသဆိုင်ရာ မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့မိန့်ခွန်းတရပ် ပြောကြားဖို့ရှိတယ်
လို့ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ ထိုင်းသံရုံးရဲ့ နိုင်ငံရေးရာ တာဝန်ခံ တန်နီ ဆန်ဂရက် (Tanee
Sangrat) က ပြောပါတယ်။ သမ္မတဘုရ်ှရဲ့ ခရီးစဉ်ကနေ နှစ်နိုင်ငံအကြား ရင်းနှီးချစ်
ကြည်မှုတွေ ပိုပြီး တည်ဆောက်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့မှာ သမ္မတ ဘုရှ် ထိုင်းနိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာမှာဖြစ်သလို သြဂုတ်လ
၈ ရက်နေ့ တရုတ်နိုင်ငံ ဘေဂျင်းမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ နွေရာသီ အိုလံပစ်ပွဲတော် ဖွင့်ပွဲ
အခမ်းအနားကို တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလည်း
Bush likely to meet Burmese activists during Thailand visit
Monday, 28 July 2008 14:59
New Delhi — US President George W. Bush is likely to meet Burmese activists during his trip to neighboring Thailand in early August, sources in Bangkok said.
The source, who declined not to be named, said Bush may havealuncheon meeting withafew Burmese activists and political observers in Bangkok, during his two day visit to Thailand.
George and his wife Laura Bush are scheduled to arrive Thailand on August6to mark the 175th bilateral relationship between the two countries. It will be his last visit to Asia before his term as president expires, reports said.
Bush, who will visit Bangkok on August6and 7, will hold bilateral talks with Thailand's Prime Minister Samak Sundaravej and commemorate 175 years of bilateral relations between the two countries, according to Thailand's daily newspaper, Bangkok Post.
During the visit, Bush will also deliveraspeech in Bangkok.
"President Bush will deliveraspeech on Asia while he is in Bangkok," the paper quoted Thailand's Foreign Ministry spokesman Tharit Jarungvat as saying. "The importance of the speech is that it will be his last speech on Asia during his presidency."
Bush is also expected to raise Burma issue during his talks with Thai officials including Foreign Minister Samak.
During his term as the President of the United States, Bush implemented stricter economic and financial sanctions against Burma's military rulers and pushed foraUnited Nations Security Council resolution on Burma.
But his effort, which was backed by the United Kingdom and France, however, failed to yield any result and ended up asaUNSC's Presidential statement, as two other veto wielding countries – China and Russia – objected to the resolution.
Bush will fly to China after ending his visit to Thailand for the Beijing Olympics, which will have its opening ceremony on August 8.